त्यसै सलमान भएका होइनन् - बलिउड - साप्ताहिक
त्यसै सलमान भएका होइनन्
बलिउडका सबभन्दा चर्चित मध्येका एक अभिनेता सलमान खानको अर्को बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘दबगं थ्रि’ प्रदर्शनका लागी तयार भएको छ । यो चलचित्रको हिजो मात्रै निर्माण टिमले प्रोमो सार्वजनिक गरेको छ । प्रोमो र यसअघि सार्वजनिक सलमानको लुक्सपछि यो चलचित्रले बलिउडमा फेरी एकपटक राम्रै उथलपुथल पार्ने अनुमान गरिएको छ ।
२५ बर्षभन्दा लामो चलचित्र यात्रामा दबंगस्टार सलमानले दर्जनौ हिट चलचित्र दिइसके । केहि फ्लप, केहि हिट चलचित्रका बाबजुद पनि पछिल्लो समय बक्सअफिसमा उनैले लिड गरिरहेका छन् ।
सलमानका बारेमा धेरैले धेरै कुरा थाहा पाइसके । तर, उनी दिनभर के के गर्छन् ? कतिबेला उठ्छन् ? कतिबेला सुत्छन् ? के खान्छन् ? जिम कतिबेला गर्छन् ? लगायत उनको २४ घण्टाको सेड्युअल भने धेरैले थाहा पाएका छैनन् । एकपटक आफ्नो लोकप्रिय अभिनेताका बारेमा जान्नुस् रमाइला केहि रहस्य ।
० सलमान नियमित रुपमा बिहान १० देखि ११ बजे सम्म मात्रै उठ्छन् । त्यसपछि परिवारका साथमा चिया तथा स्नेक्स लिन्छन् ।
० साढे ११ बजे सलमान जिम जान्छन् । जिम सेन्टरमा उनले डेढ घण्टा वर्कआउट गर्छन् । सोमबार, बुधबार, शुक्रवार वेट टे«निङ तथा शनिवार, मंगलबार र बिहिबार कार्डियो एब्स गर्छन् ।
० दिउँसो १ बजे उनले खाजा खान्छन् । खाजामा ३ वटा अण्डा, ओट्स, १०–१५ वटा जति बदाम र प्रोटिन शेक लिन्छन् ।
० दिउँसो साढे १ बजेदेखि २ बजेसम्म उनको ले मिटिङ तथा सुटिङका लागी जान्छन् ।
० सलमान राती कतिबेला घर फर्किन्छन् भन्ने पत्तो हुँदैन । तर, रातीको १२ वजेसम्म पुग्छन् । किनभने, रातको १२ पछि उनको अरु सेड्युअल छ ।
० घर फर्किएपछि डेढ घण्टा जिम गर्छन् । साथै, नियमित ५ सयपटक पुशअप गर्छन् । १ हजारपटक सिटअप गर्छन् ।
० रातको १ वजेदेखि २ वजेसम्म खाना खान्छन् । खानामा चिकन, माछा, दुइवटा अण्डा, सुप, रोटी तथा प्रोटिन शेक लिन्छन् ।
० रातको दुइदेखि तिनबजेसम्म केहि समय हिड्छन् । त्यसपछि मात्र सुत्न बेडमा जान्छन् ।
प्रकाशित :आश्विन १५, २०७६
‘दबंग ३’मा सलमान अवतार, यस्तो छ प्रोमो
यस्तो पनि लफडा
सलमान खान नै अब्बल
दुई नयाँ स्टार आश्विन ७, २०७६